चाणक्यका तीन भनाइ, जसले हाम्रो सोच बदलिदिन्छ — Imandarmedia.com
आचार्य चाणक्य, जसले आफ्नो कुटनीतिको बलमा साधारण चन्द्रगुप्तलाई राजा बनाइदिएका थिए । उनले ‘चाणक्य नीति’ नामक पुस्तक लेखेका छन् । यस पुस्तकमा जीवन र जगतका बारेमा थुप्रै कुरा लेखिएका छन्, जो हामीलागि अनुकरणिय हुनसक्छ । साथै यसले हामीलाई सार्थक मार्ग पहिल्याउन मद्दत गर्छ ।
अर्कालाई झुक्याएर, छलेर, लुटेर कमाएको धनले तपाईंलाई कहिले पनि सुख र सन्तुष्ट दिदैन । बरु, त्यसले सधै शंका, भय, त्रास, मोहको दलदलमा फसाइदिन्छ । त्यसैले धन आफ्नो पसिना, बुद्धि-विवेकबाट आर्जन गरेको हुनुपर्छ । यसरी कमाएको धनले मात्र तपाईंको मनलाई शितल तुल्याउँछ । अन्य ढंगले आर्जन गरेको धनले तपाईंको मनलाई पोल्छ ।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सत्रु को होला ? कसले हामीलाई प्रगति गर्नमा बाधा पुर्‍याएको होला ? कसले हाम्रो अनमोल समय वर्वाद गरिरहेको होला ?छिमेकी, आफन्त, साथीभाई, सहकर्मी कोही पनि यसका दोषी होइनन्/हुँदैनन् । दोषी हामी आफैभित्र छ । त्यो हो, अल्छीपन ।
वर्तमानका लागि हामी बाँच्नुपर्छ । भोलि कहिल्यै आउँदैन । हिजो त गुजि्रसक्यो नै । चाणक्यले भनेका छन्, ‘हामीले भूतको बारेमा कहिल्यै पच्छताप गर्नु हुन्न, न त भविष्यको चिन्ता गर्नुपर्छ । विवेकवान व्यक्ति जहिले पनि वर्तमानमा बाँच्छन् ।’ अनलाइन खबरबाट